Na-ege ntị Spotify music enweghị mmachi, na Spotify ngwa ma ọ bụ na-enweghị Spotify
Na-ege ntị Spotify Music enweghị mmachi, Na Spotify APP ma ọ bụ enweghị Spotify APP?
Na-ege ntị Spotify music na ma ọ bụ na-enweghị ngwa na kọmputa gị ma ọ Mac. Ị nwere ike na-ege ntị Spotify ngwa na-eji gị internet nchọgharị n'agbanyeghị nke ngwaahịa. Ma ọ bụ Internet Explorer ma ọ bụ Firefox ma ọ bụ Safari ma ọ bụ Opera nchọgharị, Spotify music nwere ike na-egwuri site nnọọ na ịga na Spotify website ma na-akpọ ndị music. Iji Spotify enweghị ngwa adịghị emetụta àgwà nke music ị na-ege ntị. Ọ bụ ezie na na ngwa, ọ na-aghọ nnọọ mfe iji Spotify.
Part 1.Listen ka Spotify music na Spotify ngwa
Part 2.Listen ka Spotify music enweghị Spotify ngwa
Download Spotify music free na TunesGo na-ege ntị na-anọghị n'ịntanetị
1.Where ibudata Spotify ngwa
The Spotify ngwa dị maka download na Spotify website na dị iche iche na-eji ngwa-echekwa. Onye ọ bụla n'elu ikpo okwu nwere Spotify dị na ha App Store. N'ihi na Android ngwaọrụ, Spotify ngwa nwere ike ibudata site na Google Play Store. N'ihi na iOS ọrụ, ngwa dị maka download si Apple App Store. N'ihi na Windows ekwentị ọrụ, ha nwere ike ibudata ya si Microsoft Windows Store. N'ihi na Windows Sistem ọrụ, e nwere ihe dịgasị iche iche nke ebe ibudata Spotify music ngwa. Ọ bụ maka download na Spotify website, CNET Download.com, Microsoft Store, Softonic, na niile isi software download saịtị.
N'ihi na Mac OS ọrụ, ha nwekwara ike ibudata Spotify ngwa si Spotify website na Mac Store na ha Mac Book.
2.How iji wụnye Spotify ngwa
Usoro nke wụnye Spotify ngwa bụ otu ihe ahụ ka wụnye ọ bụla ọzọ App na ngwaọrụ gị. N'ezie, onye ọ bụla n'elu ikpo okwu ma ọ bụ sistemụ nwere dị iche iche ụzọ wụnye ha ngwa ma usoro nke wụnye Spotify maka otu onye n'elu ikpo okwu bụ otu ihe ahụ dị ka usoro maka wụnye ọ bụla ọzọ na ngwa na na n'elu ikpo okwu.
1) .Dị Windows arụ ọrụ usoro
Mgbe nbudata Spotify installer, nanị na-agba ọsọ ya site abụọ na ịpị installer iji wụnye. Soro ntuziaka na echichi ọkachamara na ị ga-eme nnọọ mma.
2) .Dị Mac sistemụ
Usoro bụ yiri nke windows. Download Spotify Music installer si Spotify website ma ọ bụ site Apple Mac Store. Gbaa ndị installer na-eso ntụziaka na echichi ọkachamara ka n'ụzọ zuru ezu wụnye Spotify na gị Mac. Mgbe nwụnye zuru ezu, Spotify ngwa ga-dị na gị na desktọọpụ.
3) .Dị iOS ngwaọrụ
N'ihi na iOS ngwaọrụ soro ntuziaka n'okpuru ibudata ma wụnye Spotify.
Iji nweta Spotify, nanị chọọ Spotify na App Store eji gị Apple ngwaọrụ.
Enweta na "Sinụ". Ị ga-achọpụta na ọ na-agbanwe ya site nweta "" na "Iwunye". Enweta na "Wụnye" iji wụnye ngwa na ngwaọrụ gị.
Mgbe nwụnye zuru ezu, ego Ihuenyo nke ekwentị gị na enweta na Spotify ngwa na-agba ọsọ na-eji ngwa.
4) .Dị Android ngwaọrụ
Usoro nke wụnye Spotify na gam akporo ngwaọrụ bụ yiri nke iOS.
Open Google Play Echekwala na ịchọ Spotify. I nwekwara ike ibudata .apk faịlụ site ọzọ weebụsaịtị na mgbe ahụ wụnye .apk ngwa gị android ngwaọrụ.
Enweta "Iwunye" iji wụnye Spotify gị Android ngwaọrụ.
Mgbe echichi zuru ezu, isi n'ụlọ gị na ihuenyo na enweta na Spotify ngwa na-emeghe ngwa.
5) .Dị Linux sistemụ
Mepee iwu akara ọnụ site na ịpị "Ctrl + Alt + T" (na-enweghị ruturu).
Ị ga-jụrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na. Press Y na gị keyboard na kụrụ Tinye ịnọgide. Ugbu a, na-eche rue download na echichi na-agwụ agwụ.
I nwere ugbu a ọma arụnyere Spotify na gị Linux usoro eji iwu akara ọnụ. Iji ego ya na-agba ọsọ ahụ Spotify ngwa, nanị chọọ Spotify na ị ga-ahụ na ọ bụ dị na gị Linux usoro.
3.How na-ege ntị music na Spotify ngwa
Nanị ibudata na wụnye Spotify ngwa na ngwaọrụ gị.
Mepee ngwa na abanye na na gị log na nkọwa.
Ị nwere ike abanye na na Facebook ma ọ bụrụ na ị na-achọghị iji adreesị email gị. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu akaụntụ, nanị enweta ma ọ bụ pịa debanyere na-enweta ihe na akaụntụ maka onwe gị.
Chọọ maka artists, album ma ọ bụ playlist.
Enweta ma ọ bụ pịa Play na-ege ntị music na Spotify ngwa.
Part 2. ntị Spotify music enweghị Spotify ngwa
1. Gee Spotify music na saịtị
N'ihi na ndị na-enweghị mmasị na nbudata ọ bụla ngwa ma ọ bụ software na ha na ngwaọrụ, Spotify-enye gị ohere na-ege ntị music ziri ezi na ihe nchọgharị weebụ gị.
Mepee nchọgharị weebụ gị na-aga www.spotify.com ma ọ bụ http://play.spotify.com/.
Pịa na abanye na na n'elu nri akuku nke ibe weebụ ahụ.
Abanye na akaụntụ gị ma ọ debanyere ma ọ bụrụ na ị na-adịghị otu akaụntụ. I nwekwara ike abanye na na gị Facebook akaụntụ ma ọ bụrụ na unu achọghị iji adreesị email gị.
Họrọ ma ọ bụ chọọ maka music ị chọrọ ige ntị na pịa na play button.
> Resource> Music> Gee Spotify Music enweghị mmachi, Na Spotify APP ma ọ bụ enweghị Spotify